माओवादी सहितका १५ जना सांसद पदबाट बर्खास्त, हेर्नुस् काे काे परे ? – hamrosandesh.com
माओवादी सहितका १५ जना सांसद पदबाट बर्खास्त, हेर्नुस् काे काे परे ?
संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने योजनामा धक्का लागे पनि सरकारले अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका रिक्त स्थानहरुमा उपनिर्वाचन गर्ने भएको छ । अब हुने उपनिर्वाचनले सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरु जनतामा कति लोकप्रिय÷अलोकप्रिय छन् भन्ने परीक्षा गर्नेछ । यसअघि माओवादीले जितेका १२ स्थानमा हुने उपचुनावले खासगरी माओवादीको परीक्षा गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने,‘आयोगको कामै निर्वाचन गराउने हो । आम चुनाव गर्ने हो भने आयोगलाई ९० दिन समय चाहिन्छ, उपचुनावचाहिँ ६० दिनमै गर्न सकिन्छ ।